← राजधानी दैनिकमा आन्दोलनको तयारी	संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न तथा घोषणपत्र सार्वजनीक →	घातक पञ्चेश्वर परियोजना	21
गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जम्बो टोलीसहित यतिखेर भारत भ्रमणमा छन् । परम्पराकै निरन्तरताको रूपमा हुन लागेको यो भ्रमण पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणभन्दा अहिले राजनीतिक वृत्तमा फरक ढंगले चर्चामा छ । भारतकै इशारामा बनेको आरोप लागेको २२ दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका रूपमा माधव नेपालको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई दह्रोसंग उठाउने बलियो प्रतिपक्षी एकीकृत (माओवादी)का कारण पनि नेपालको भ्रमण चर्चामा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएर पनि आफ्नै पहलमा सम्पन्न गरेको महाकाली सन्धिको एउटा अंग पञ्चेश्वरका विषयमा देखाउनुभएको रुचि र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले कुनै सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न गरेको खबरदारीका कारण पनि नेपालको भ्रमण सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको हो । हुन त यसलाई सद्भावना भ्रमणको रूपमा सीमित राख्ने निर्णय गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री नेपालले पञ्चेश्वर परियोजनामा देखाउनुभएको रुचिका कारण यो भ्रमणले सबलाई सशंकित बनाइदिएको छ । एकीकृत (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जांदासमेत नेपालले पञ्चेश्वरका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको मुलुकमा तीव्र विरोध भएपछि नेपालको संसद्ले पानी लगायतका विषयमा सामान अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, महाकाली नदीलाई सीमानदी भनिनुपर्ने लगायतको कुरालाई स्पष्ट पार्दै ०५३ असोज ४ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जुन प्रस्तावलाई पनि सन्धिसरह नै मान्यता दिने कुरा तात्कालीन अवस्थामा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नेपालले अहिले संकल्प प्रस्तावको विषयमा मौन बसेर त्यसको बारेमा कहीं कतै पनि छलफल नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
कहिलेदेखि उठ्यो पञ्चेश्वरको मुद्दा ? भारतका लागि पञ्चेश्वरको मुद्दा नयाँ भने होइन । उसले १९२० मा वनबासा ब्यारेज बनाएको थियो । त्यही बेलादेखि नै पानीका लागि नैतिक/अनैतिक जुनसुकै हर्कत अवलम्बन गर्ने नीति भारतले बनाएको घटनाक्रमहरूले पुष्टी गर्दै आएको छ । वनबासाकै अनुशरण गरेर भारतले कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बबई र राप्तीमा ब्यारेज बनाएको छ ।
सन्धिको वैधतामाथिको प्रश्न नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिंदै गरिएको यो सन्धिको वैधतामाथि अहिले भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सन्धिमा ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने, १ वर्षभित्र दुवै देशले आर्थिक स्रोत साधन जुटाउने र ८ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गरिसक्ने भनिएको छ । त्यसका अलावा दश वर्षको अन्तरालमा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र संशोधनसमेत गर्न पाइने कुरा सन्धिमा स्पस्ट उल्लेख छ । तर सन्धि भएको १३ वर्ष पूरा भएर चौध वर्ष पुगिसक्दा समेत सामान्यभन्दा सामान्य काम समेत अघि बढ्न नसक्दा यसको वैधानिकतामाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।
के हो पञ्चेश्वर परियोजना ? पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेको डडेलधुराको पञ्चेश्वर क्षेत्रमा ३१५ मिटर अग्लो बांध हाली वर्षभरीको भेल संकलन गरेर त्यसको समग्र उपयोग गर्ने योजना हो । विद्युत् उत्पादन, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतका विषयहरूसमेत गरी यसको बहुउद्देश्य रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यो परियोजना भारतका लागि मात्रै बहुउद्देश्यीय हो भने नेपालका लागि भने एक उद्देश्यीय मात्रै हो ।
यस परियोजना मार्फत पञ्चेश्वरबाट ६४८० मेगावाट, रुपालगढबाट २४० मेगावाट र सोही अनुपातमा टनकपुरबाट विद्युत् उत्पादन गरिने बताइएको छ । यस परियोजनाका लागि संसारकै सबैभन्दा अग्लो बांध निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । नेपालको २,३८० वर्ग किलोमिटर र भारतको ९,७२० वर्गकिलोमिटर भू-भागमा फैलने यो बांध निर्माण भएपछि नेपालीले वर्षेनी अरबौं रकम प्राप्त गर्ने भनेर नेपालका केही राजनीतिक पार्टीहरूले प्रचार गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि पर्यावरणीय र भुकम्पीय दृष्टिकोणले समेत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको यो बांध जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने आशंका पनि एकाथरी मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यस्ता तर्क गर्ने मानिसहरूका अनुसार, परियोजनाले सार्थकता पाएमा विश्वमै यतिअग्लो बांध निर्माण भएको क्षेत्र यही हुनेछ । जसको निर्माण कार्यको अनुभव न त भारतीय पक्षसंग नै छ, न त नेपाल पक्षसंग । जसका कारण यो जुनसुकै बेला फुटेर थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसो त नेपालले आफ्नै देशको पानीमाथिको सार्वभौम अधिकारलाई असमान सन्धि सम्झौताकै भरमा विस्तारवादीहरूका सामु सुम्पने धृष्टता स्वरुप यो परियोजना आएको छ । युनेस्कोले हालसालै गरेको एक भविष्यवाणी अनुसार विश्वका धेरै देशहरूले पानीको भौतिक अभाव (फिजिकल स्कारसिटी अफ वाटर) को परिस्थिति सामना गनुपर्ने बताइरहेकै बेला नेपालका शासकहरू भने मात्र विद्युतको बराबरी अंशमा पानीमाथिको आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई यसै परियोजना मार्फत विस्तारवादीका सामु लम्पसार परेर सुम्पिन लागिपरेका छन् । जुन दिर्घकालमा नेपालका लागि घातक हुनेछ । परियोजनामा के छ ?
० पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले नेपालको लागि फाइदा हुने परियोजना भनिरहेका छन् भने सत्ता प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत (माओवादी) यसको विपक्षमा छ । प्राविधिक हिसाबले हेर्दा तपाइं यी दुई पक्षमध्ये कसको भनाइलाई उचित ठहर्र्याउनु हुन्छ ? – होइन, यसमा सत्ताधारी र विपक्षीहरूको सहमति/असहमतिको कुरा भन्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जसरी महाकालीको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन खोजिरहनुभएको छ । के त्यो जिउँदो छ त ? कानुनी रूपमा त्यसको वैधता छ कि छैन ? जब त्यसको अहिले कानुनी वैधता नै छैन भने त्यो मुद्दामा सम्झौता गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । गर्छ भने पनि त्यसलाई जनताले मान्नेवाला छैनन् ।
० नेपाली पक्षका प्रधानमन्त्रीले त यसबाट नेपाललाई फाइदै फाइदा छ भनिरहनुभएको छ नि ? – पहिलो कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्री तिनै व्यक्ति हुन् जसले महाकालीबाट उत्पादन भएको बिजुली सेटलाइटबाट चीनमा पठाउँछु भनेका थिए । त्यही व्यक्ति अहिले, नेपाली जनताको नभइ २२ दलको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा गएका छन् । प्रश्न के-हो भने एक त त्यो सम्झौता नै गलत छ भन्ने कुरा एमाले फुटेर पनि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसपछि सदनमा संकल्प प्रस्ताव पनि आयो, यी सबै कुराले नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि यो सन्धि नै असमान छ । त्यसो भएको हुंदा फाइदा होइन यो त नेपालीका लागि घातक छ ।
० महाकाली सन्धि अनुसार यसको डीपीआर किन बनेन त ? – जब हामीले टनकपुरको विषय उठायौं, त्यसलाई डाइभर्ट गर्न उनीहरूले महाकालीका कुरा ल्याएका हुन् । त्यसलाई माधव नेपालहरू हाम्रो एजेन्डा र हामीले बनाएको योजना भनिरहेका छन् । तर त्यसो होइन, यो भारतले नै बनाएको योजना हो । सबै पानी आफैले लिने र नेपाललाई थोरै दिने भन्ने कुरा पनि नेपालले मान्छ ? नेपालले त्यस्तो प्रस्ताव राख्छ ? त्यसैबाट प्रस्ट छ । त्यसकारण यो सबैभन्दा घातक सन्धि हो । जसको नेपाली जनताले विरोध गरेपछि भारत आफू अनुकुल सरकारको प्रतीक्षामा बसेको थियो । अहिले उसलाई त्यस्तो सरकार मिलेको छ । त्यसैकारण वैद्यता सकिएका सन्धि र परियोजनालाई अहिले उठाउन खोजिएको छ ।
० यो परियोजनाबाट नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदा के छन् ? – नेपाललाई फाइदा त केही पनि छैन, त केवल बेफाइदै बफाइदा मात्र पहिलो कुरा पानीमाथि समान अधिकार हुनुपर्छ । यसको मुहान कुन हो लिम्पियाधुरा हो कि अहिले भारतले कालापानीमा देखाएको नक्कली क्याम्पको झरना ? लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने हामीले प्रमाणित पनि गरिसक्यौं । अर्को कुरा त्यो सन्धिमा समान अधिकारको कुरा छैन । त्यहीबाट निस्कने बिजुली पनि समान नपाइने कुरा छ । पञ्चेश्वर बनाएपछि दुवै पक्षको भू-भाग डुवानमा पर्छ । विस्थापित हुनेहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने बारेमा राम्रोसंग केही भनिएको छैन । महाकाली सन्धिको विरोध नेपालमा त छंदैछ, भारतमा पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ । उत्तराञ्चलका धेरै मानिसले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
० भनाइको मतलब हामी सबै क्षेत्रबाट हेर्दा यसमा ठगिएका छौं, होइन त ? – ठगिएका मात्रै होइन, धेरै ठगिएका छौं ।
← राजधानी दैनिकमा आन्दोलनको तयारी	संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न तथा घोषणपत्र सार्वजनीक →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...